China Plastic Welding Hot Air Gun LST1600S orinasa sy mpamatsy | Lesite
Basy rivotra mafana LST1600S
LST1600S New Professional Hot Air Welding Fitaovana
Ity basy lasantsy rivotra mafana ity dia mampiasa endrika ergonomika, maivana kokoa, azo entina, azo ampiharina ary mahazo aina. Miaraka amin'ny maotera vaovao nohavaozina, ny switch rocker mahatohitra splash kalitao avo lenta ary singa fanafanana maharitra no mahatonga ity basy rivotra ity ho malaza amin'ny mpampiasa. Ity basy lasantsy rivotra mafana ity dia ampiasaina betsaka amin'ny fametahana plastika, takelaka, fantsona ary gorodona plastika. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny famolavolana mafana, ny fihenan'ny hafanana, ny fanamainana ary ny fandoroana.
Nandray baiko kely.
Hihaona amin'ny serivisy namboarina manokana.
Welding nozzles samy hafa habe toy ny 20mm/40mm/φ5mm azo voafidy malalaka araka izay ilaina.
Mba hamenoana ny fepetra takian'ny 120V sy 230V amin'ny firenena samihafa sy ny fenitra EU, ny fenitra amerikana, ny fepetra takian'ny plug UK.
15 taona ny tantaran'ny fampandrosoana, ekipa ara-teknika tena tsara, asa tanana tsara tarehy, kalitao azo antoka sy azo itokisana no antony lehibe mahatonga ny orinasanay hijanona eo amin'ny lohalaharana eran'izao tontolo izao.
Power Switch Original nafarana - ela velona
Ny fampiasana rafitra tsy misy vovoka sy tantera-drano, ao amin'ny tontolo fanorenana mafy dia mety hahatratra ny ora fiasana mety indrindra
Ny singa fanafanana vao nohavaozina dia miasa fiarovana be loatra - Fiarovana marina kokoa
Ny sensor photoelectric silisiôma vaovao dia manolo ny fanoherana photoelectric tany am-boalohany, izay mahatonga ny fiarovana ho marina sy azo antoka kokoa. Indrindra fa ao amin'ny toeram-panorenana ivelan'ny trano ny tafo, dia afaka amin'ny fomba mahomby hisorohana ny sandoka fanairana ny rivotra mafana basy vokatry ny taratry ny andro mahery amin'ny PVC / TPO fitaovana fotsy.
Knob Potentiometer avo lenta - Maharitra sy azo ianteherana
Ny famolavolana rafitra metaly potentiometer avo lenta, matanjaka kokoa sy maharitra, famehezana azo antoka kokoa, fiainana maharitra.
Motor vao novolavolaina sy borosy karbônina mahatohitra - ny borosy karbônina voalohany dia afaka mahatratra 1000 ora (ny tontolo iainan'ny mpanamboatra anatiny)
Ny kalitaon'ny maotera fiara vao novolavolaina dia azo antoka kokoa. Miaraka amin'ny fitondra vovoka sy borosy karbônina mahatohitra, ny fiainan'ny motera fiara manontolo ≥ 1000 ora fiasana.
teo aloha: Extrusion welder Granules LST620
Manaraka: Digtal Hot Air Welding Tools LST1600D
Zintin'aratra 230V / 120V
Nahitsy ny maripana 50~620 ℃
Haben'ny rivotra Max 180 L/min
Tosi-drivotra 2600 Pa
Lanja afa-karatsaka 1,05 kg
Haben-tanana Φ58 mm
Aseho nomerika tsy misy
Welding ny PP plastika profil
Welding PP takelaka ho an'ny anatiny soson'ny fiara
Kitapo plastika welding
Welding TPO membrane amin'ny tafo
Manome lasantsy rivotra mafana
Asehoy ny Hot Air Tools
Fitaovana mahery vaika mahery vaika LST3400A
Fizarana basy mafana rivotra mafana LST2000